Dichroic PVC Firimu Vagadziri - China Dichroic PVC Firimu Vatengesi & Fekitori
0.4mm Dichroic Iridescent PVC firimu yekugadzira shangu, mabhegi uye kushongedza
Isu tinopa Dichroic Iridescent PVC firimu 2020 Magical Machira ekugadzira shangu, mabhegi uye kushongedza. Isu takave nyanzvi mukushongedza firimu kweanopfuura makore gumi neshanu, tichifukidza mazhinji emusika weEuropean neAmerica. Isu tiri kutarisira kuzove wako wenguva refu mudiwa muChina.
0.2mm Dichroic Iridescent PVC firimu Magical Machira ekushongedza, dhizaini dhizaini uye mhizha
0.2mm Dichroic Iridescent PVC firimu Magical Zvishongedzo zvekushongedza, dhizaini dhizaini uye hunyanzvi ndiko kupenda kwePV uye iridescent firimu, iro rinoshandiswa zvakanyanya mukushongedza kwemasaga, shangu uye mbatya. Ichowo chinhu chakanakira hunyanzvi dhizaini uye kugadzira hunyanzvi. Isu tanga tichipa ese marudzi ekushongedza firimu kweanopfuura makore gumi neshanu, zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa kune akawanda emusika weEuropean, American neAsia. Taura nesu ikozvino, isu tinokupa iwe mhando yakanaka neakanakisa sevhisi.